Inona no hatao raha mandainga ny mpiara-miasa | Bezzia
Inona no hatao raha mandainga ny mpiara-miasa
Maria Jose Roldan | 07/06/2021 22:00 | fifandraisana
Tsy ny lainga rehetra no mitovy ary tsy mitovy ny manao azy tsy manan-tsiny, ny fanaovana izany amin'ny ratsy ary mahafantatra fa hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ilay olona iray hafa izany. Raha ny mpivady, ny lainga miverimberina sy mahazatra dia hanimba ny iray amin'ireo soatoavina manan-danja indrindra amin'ny fifandraisana rehetra: ny fahatokisana.
Raha tsy misy fitokisana dia tsy afaka mandova karazana mpivady izay azo heverina ho salama. Tsy azo avela amin'ny toe-javatra rehetra izay ampiasain'ny iray amin'ireo mpivady lainga matetika ary raha mitranga izany dia tokony hatsahatra haingana araka izay tratra izy ireo.
1 Ny lainga ao amin'ny mpivady
2 Inona no hatao raha mandainga ny mpiara-miasa
Ny lainga ao amin'ny mpivady
Marina fa manjombona ny lainga ary raha ny mpivady dia tsy misy ankanavaka izany. Na izany aza, ny ampahany betsaka amin'ireo lainga ireo dia misy ny fanesorana ireo zava-misy isan-karazany izay afaka manampy amin'ny fanamafisana ny mpiara-miasa. Io ilay fantatra amin'ny hoe lainga fotsy ary tadiavin'izy ireo mihoatra ny zava-drehetra mba hanome fiarovana sy tanjaka lehibe kokoa ho an'ilay fifandraisana. Hafa tanteraka ny lainga toa izany ary miteraka fahasimbana lehibe eo amin'ny mpivady, na ny famakiana sanda ilaina toy ny fifampitokisana eo amin'ny olona roa aza.
Raha sendra mandainga matetika sy matetika ny mpivady, zava-dehibe ny manontany sy mahafantatra ny antony ampiasainy lainga ao anatin'ny fifandraisana. Manomboka eto, ny mpivady dia miandraikitra ny fanapaha-kevitra raha manapa-kevitra ny hanohy ny fifandraisana toy izany izy ireo na raha tsy mendrika ny fanindroany ary hampihena ny fatiantoka azony. Na ahoana na ahoana, tsy azonao atao ny miaritra mpandainga ara-dalàna satria lasa poizina ny fifandraisana ary tsy hisy karazana fifampitokisana eo amin'ny roa tonta.
Tsy mitovy mihitsy fa nandainga indray mandeha fotsiny ny mpivady na tsy fahazarana no anaovan'izy ireo izany. Avy eto, ny olona voafitaka dia tsy maintsy manontany tena raha toa ka mendrika itokisana ilay olona iray hafa ary raha mitovy amin'ny soatoavina tokony hisy eo amin'ny fifandraisana salama izy.
Amin'ny tranga rehetra, ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifandraisana amin'ny mpivady no tena ilaina raha ny famahana ny karazana olana na fifandonana mety hitranga. Ankoatr'izany dia tsy maintsy misy ny fanoloran-tena avy amin'ny olona roa, satria raha tsy izany dia zavatra mety hitranga indray amin'ny fotoana fohy na antonony.
Ny fiheveran-tena ho an'ny olona maratra dia lafiny iray hafa tokony hodinihina rehefa mamela ny lainga. Tsy mora na tsotra ny fanarenana ny fahatokisana tapaka ary raha ambany ny toe-pihetseham-po dia mety ho sarotra ny hamerina ny fifandraisana amin'ny tongotra. Izany no antony maha-zava-dehibe sy tena ilaina ny fahatokisan-tena amin'ny tranga toy izany. Tokony ho azonao antoka tsara alohan'ny hanaovanao ny dingana lehibe amin'ny famelana ny helok'ilay olona mandainga ary manome azy ireo fotoana faharoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Inona no hatao raha mandainga ny mpiara-miasa
Kopy sôkôla, crème ary voanjo
Ahoana ny fomba handravahana ny fomba kanto any ambanivohitra